Umvambo wokuphawula ikhosi yobomi bakho: ikhampasi yenyuka | Ukuzoba
Umvambo wokuphawula ikhosi yobomi bakho: ikhampasi yenyuka
UAntonio Fdez | | Iitatoo, Iitatto ezinemilo, Izinto kunye neeTattoos zezinto
La Ikhampasi uRose Luhlobo lwe tattoo kunye nentlawulo enzulu yomfuziselo emva kwayo. Uyilo olwenziweyo kumaxesha akutshanje luye lwathandwa kakhulu kwihlabathi le-inki. Kungenxa yoko le nto siza kuchaza yonke into oyifunayo malunga nale nto yolwandle enxulumene nayo Iitattoos zolwandle. Kwaye, njengoko siza kubona kwinqaku lonke, intsingiselo yalo inento yokwenza nelizwe lolwandle.
Los Ikhampasi yemaTatoo Yinto eyaziwayo kakhulu kumvambo ophakathi komncinci ngenxa yemilo yejiyometri kunye nokubanakho ukudityaniswa kwezinto ezininzi ezinxulumene nentsingiselo. Enkosi kwizithethe zayo, olu phawu lwembali loomatiloshe lunyamezelekile ukuza kuthi ga kulo mhla ngenxa yobugcisa bokwenza umvambo. Iyintoni intsingiselo yayo okanye luhlobo luni lwekhampasi eyile yoyilo esinokwenza itattoo ngamanye amanqaku esiza kujongana nawo kweli nqaku.
1 Intsingiselo yekhampasi yema tattoos
2 Kuphi ukwenza tattoo ikhampasi yenyuka
3 Ikhampasi yanyusa uyilo lwe tattoo
4 Iifoto zeCompass Rose Tattoos
Intsingiselo yekhampasi yema tattoos
Yintoni ikhampasi? Ngumbuzo wokuqala ekufuneka sifune impendulo kuwo ukuze sazi intsingiselo kunye nesimboli emele le tattoo. Ukuba ujonga kufutshane iifoto ze Ikhampasi yemaTatoo ohamba kunye eli nqaku, uyakuqonda ukuba sisangqa esiphawule izifundo apho umda wobubanzi bolwandle wahlulwe.
Uphawu esinokulufumana kwiitshathi zokuhamba. Kungenxa yoko le nto ikwabizwa ngokuba yi «I-Naval yenyuka». Nangona kunjalo, kwimeko yokugqibela bahlala bephathwa bodwa kuba kwezi roses zaselwandle kukho into emilise okwenkwenkwezi. Into eyahluke mpela kule siyibonayo apha. Kwikhampasi ephakama sifumana amanqaku ahlukileyo abhekisa kumanqaku aphambili kunye nolwalathiso olunokulandelwa yimimoya.
Kwindawo ephezulu yekhampasi evukile, ngokungathi yalatha emantla, sifumana i-fleur-de-lis. Enye into leyo yonyusa intlawulo yokomfuziselo yeCompass Rose. Khumbula ukuba i-fleur de lis inxulunyaniswa namandla, ulawulo, imbeko kunye nokunyaniseka, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Kodwa, ukuphinda uhlalutye intsingiselo yekhampasi yema tattoos, imele eyona nto iphambili. Kwaye yile ungalahleki embindini wolwandle. Ikwanxulunyaniswa nomnqweno womntu wokufuna ukugcina umendo ochanekileyo ebomini bakhe ukuze angaze aphambuke kwikhondo elimiselweyo. Kwelinye icala, kufuneka siyikhumbule into yokuba sidlulisa unxibelelwano lwethu olusondeleyo nolwandle.
Kuphi ukwenza tattoo ikhampasi yenyuka
Ndilufumana phi ikhampasi evuswe umvambo? Luhlobo lwe tattoo oluhambelana kakuhle kakhulu neendawo ezahlukeneyo zomzimba wethu. Ukuba uyindoda kwaye unomzimba ochaziweyo, isifuba sinokuba yindawo efanelekileyo yale tattoo ukusukela, njengoko besichazile kwicandelo elidlulileyo, enye yeentsingiselo zayo kukuba limele ulwalathiso esilulandelayo kwimihla yethu ukungalahleki kwindlela yethu.esifuna ukudlula ebomini bethu.
Nangona kunjalo, ingalo, indleko okanye nakweyiphi na indawo yomlenze inokuba yindawo yokuthatha umvambo wekhampasi. Yonke into iya kuxhomekeka kubungakanani be tattoo, ukuba sele sinenye kuloo ndawo kunye noyilo esiza kulukhetha.
Ikhampasi yanyusa uyilo lwe tattoo
Ukuba okwangoku ugqibe kwelokuba ufumane ikhampasi ye-tattoo, unokuzibuza ukuba loluphi uhlobo loyilo ofuna ukulubamba kulusu lwakho. Kwi elandelayo Ikhampasi yenyuka igalari ye tattoo onokuyifumana ekupheleni kwenqaku, uyabona ukuba ngumbono we tattoo odityaniswe nezinye izinto ezininzi. Ubukhulu becala zibhekisa kwilizwe lolwandle.
Imephu, ukugwinya okanye nayiphi na into eselwandle ifanelekile ukuba ibhalwe tattoo ecaleni kwekhampasi. Ngoku, ukuba ucinga ukwenza umvambo kuphela kwekhampasi ephakanyisiweyo, uluvo lwam kukuba ukhetha uyilo olunendlela encinci kunye nenhle. Oko kukuthi, umvambo awufakwanga kakhulu kulwandlalo olucocekileyo nolucocekileyo. Kwaye yile, njengoko benditshilo, ngokombono wam, ikhampasi yanyusa umvambo ngaphandle kwalo naluphi na olunye uhlobo lwento, inokuba yinto ethile.
Unokuthathela ingqalelo ukubanakho kokufumana umvambo kwenye yeendlela ezithe zathandeka kwiminyaka yakutshanje. Enye yazo inokuba sisimbo se-watercolor se tattoo, esaziwa ngcono njenge "watercolor". Okanye, unokuhlala ukhetha uyilo lwendabuko, oluhlala lubheja olukhuselekileyo.
Iifoto zeCompass Rose Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Umvambo wokuphawula ikhosi yobomi bakho: ikhampasi yenyuka
URoberto Fernandez Giordano sitsho
Enkosi kakhulu ngokukhankanya i tattoo yethu. Kuyanelisa kakhulu ukuba abantu bayayithanda.
Phendula URoberto Fernández Giordano
UAlberto Perez sitsho
Akukho sizathu sokubanika. Kuluyolo ukufumana iiTattoos; kuzo zonke endiye ndabelana ngazo kule bhlog, yenye yeentando zam. Ndiyinyani ngokunyanisekileyo.
Phendula u-Alberto Pérez
Molweni kengoku iyintoni intsingiselo yomntu onecampass rose tattooed ???
Kwelinye icala, uphawu kumaxesha amandulo lwalunceda ukukhokela abalobi kunye noomatiloshe kuhambo lwabo xa izinto zokuhamba ngolwandle zazingabalulekanga kwaye ukuhamba ngolwandle kwakuyinto entle. Nangona kunjalo, kule mihla, singatsho ukuba nabani na ogqiba ekubeni enze ikhampasi yanyusa itattoo ukuze angalahli ikhondo lobomi bakhe kwaye afezekise "injongo ayifunayo." Ikwanxulunyaniswa nekhampasi evukile kunye nesikhokelo, uhambo lwenkululeko kunye nenkululeko. Ndiyathemba ukuba isombulule amathandabuzo akho. Umbuliso kunye nombulelo ngengcaciso! 🙂
Iikristale zebhola zeCrystal: izinto eziyindida nezimangalisayo
Ukugqobhoza iTragus, yonke into oyifunayo kufuneka uyazi ngayo